सल्लाको देशमा ! — Himali Sanchar
सल्लाको देशमा !
उउउउउ त्यो माथिको ट्रक तल झर्न लाग्या हो कि? माथि जान लाग्या हो ?
अनायास बुनुको मुखबाट निस्किएको थियो ।
हामी सबैका आँखा सोझिए माथिको भीरपट्टि । ठाडो उकालोमा सात ओटा घुम्ती फन्को मार्दै गरेको सडकको आकृति देखिएको हो । एउटा ट्रक त्यही सडकमा कछुवाको गतिमा हिडिरहेको देखियो ।
हामी कपुरकोटमा आइपुगेका छौं । मोटरसाइकिलको स्पीड इन्डिकेटरले १३९ किलोमिटर कुँदेको जनाउ दिइरहेछ । घडीमा हेरेको साढे बारह बजेको छ । यो २०७४ साल चैत्र दश गतेको दिन हो । चैत्राष्टमीको तिथिले हामीलाई आज यात्रु भन्दा पनि तीर्थालु बनाएको छ । हामी सर्वनामभित्र आज पाँच जना प्राणी समेटिएका छौं — युवा मित्र कुमार लामिछाने, उनकी पत्नी सुदेष्णा, सानो फुच्चे आर्यभबाबु, मेरो जीवन सहयात्री बुनु र म ।
कपुरकोटको चोकैबाट दाहिने लागेको छ उकालो । चिया पिउन रोकिएका हौं हामी यहाँ तर, हाम्रा आँखा त्यही उकालोपट्टि सोझिएका सोझियै छन् ।
‘रोल्पाको धनवाङ जाने सडक हो यो’ होटलका साहुजीले नसोध्दै जबाफ दिएर हाम्रो कुतुहलता मेटाउन खोजे । हामी उनीसित यसरी सोध्न लाग्यौं कि मानौं हामी त्यही उकालो चढ्न आएका हौं । चिया पिउने मेसो बन्यो उनको बोली । कपुरकोटमा आएर चाखेको खल्लो काफलको चर्चा शुरु नहुँदासम्म त्यही सडक बनिरह्यो हाम्रो गफको विषय ।
बिहान सात बजे हिंडेका हौं हामी नेपालगंजबाट । मोटरसाइकिलमा बत्तिदै यात्रा गर्नु जहिले पनि रोमाञ्चक हुन्छ मेरोलागि । कुमार पनि कम्ति रहरिला होइनन् रहेछ तर आज बिचरा उनलाई बिहानैदेखि टेन्सनले छोडेको छैन । सुदेष्णा बिहान केही नखाएर हिडेकी रहिछन् । बाक्लो कपडा पनि नलगाएकी, काखमा बच्चा, खाली पेट, मोटरसाइकिलको हावा । चिसोको प्रहारले उनलाई भेटिहालेछ । अमिलियामा भात खाएर उकालो चढेदेखि उनी वान्ता गरेको गरेइछिन् । कपुरकोटमा पुगुन्जेल लखतरान परिहालिन् । तातो चिया र काफल पेटमा परेपछि तङ्रिएको छ उनको जिउ ।
‘बिहान केही खाएर हिड्नु पर्छ, बाक्लो लुगा लगाउनु पर्छ’ भनेर मैले हिजै कुमारलाई भनेकै हुँ तर उनीहरुले टेरेनन् । हावा तालमा यात्रामा हिंडेपछि यस्तै दुःख पाइन्छ’ भनेर गाली गर्न मन लागेको हो तर हाँसिरहने कुमारको अनुहार र वान्ता गरेर लखतरान पर्दा पनि ‘कति रमाइलो ठाउँ है’ भनेर जिज्ञासा पोखिरहेकी सुदेष्णालाई गाली गर्न मन लागेन । हामीलाई भने विन्डचिटरले जोगायोे ।
आज बुनुको उत्साहलाई देखेर भने म छक्क परेको छु । मोटरसाइकिलमा एक घण्टा कुद्यो भने ढाड दुखिहाल्ने, जाडोले कान तथा घाँटी छोप्नु पर्ने र भोक लागि हाल्ने उनका पुराना बानी कता हराएछन् कुन्नि आज !
कपुरकोटमा चिया पिएपछि सोझै ओरालो लाग्यौं । बाटो घुमाउरो छ । पिच ठाउँठाउँमा उप्किएर खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । मोटरसाइकिलको गतिलाई अवरुद्ध पारिरह्यो बाटोले । मुलपानी काटेर अरिङगालेफेदी पुगेपछि ओरालो सकियो । अब पाल्नैपाल्नो लाग्यो बाटो । समथरलाई पाल्नैपाल्नो भन्छन् यतातिर । लुहाम नपुग्दै शारदा नदीको बगर भेटियो । बगरैबगर कुद्यौं निकैबेर ।
शंखमुल आयो । शारदा नदीको बगरमैं बसेको सानो बजार हो यो । कपुरकोटबाट धेरै होइन मात्र एक्किस किलोमिटर रहेछ । तराईमा यति दुरी छिचोल्न धेरै समय लाग्दैन । पहाडमा भने यति दुरी काट्नु पनि धेरै लाग्छ । शारदाको पुल भन्नु नै शंखमुलको चिनारी हो कि जस्तो लाग्यो । शंखमुलबाट दाहिने लाग्यौं । केही बेर शारदाकै ढुङ्गेबगर कुद्यौं । यहाँनिर नदीको सतहभन्दा बगरको सतह गहिरो छ कि जस्तो भान पर्छ । बर्खामा शायद पानीले जलमग्न हुँदो हो यो बगरको बाटो । नदीमा नुहाउँदै छन् मान्छे । गाईबस्तु चर्दैछन् यत्रतत्र । एउटा सानो खोल्सो पार गरेर अलिअलि उकालो लाग्यो बाटो । सल्ला र मेलका रुखले भरिएको पाखामा उकालो चढ्दै गयो बाटो । उकालोको धुमिल दृश्यमा हराउन लाग्यो मन । चैत्रको शुष्कताले छोपिसकेको छ वातावरणलाई । बिहे गर्दिन भनी अठोट गरेर बसेकी युवतिको मन पनि व्याकुल हुन्छ रे चैत्रमा । चैत्रको अनौंठो उदासी फैलिएको छ चारैतिर । यही उदासीमा बोटबिरुवामा पालुवाहरु टुसाउन लागेका छन् ।
तीन किलोमिटर जति कुद्दै चार पटक बाटो मोडिएपछि थुम्कोको टुप्पोमा पुग्यो सडक । यही हो छायाक्षेत्रको आँगन । दुई तह परेको फराकिलो थुम्को उज्यालो र सफा छ । तल्लो थुम्कोमा गाडी पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भने माथिल्लो थुम्कोलाई सम्याएर आँगनको स्वरुप दिइएको छ । आँगनको बीचैमा नागाबाबा हरि गिरिको प्रस्तर मुर्ती प्रतिष्थापित छ भने वरपर मन्दिरका संरचना उभिएका छन् । छत्रेश्वरी देवी मन्दिर, पिशाचेश्वर महादेव मन्दिर, यज्ञशाला, गणेशमुर्ती, सानासाना देवालय र शिवालयले आँगनलाई वरिपरिबाट घेरेका छन् । अलि पर मन्दिरको गुठीको कार्यालय र शिवधुनी पनि देखियो ।
तीर्थयात्रीहरुको आवतजावत अनवरत चलिरहेकै छ । कोही उकालो चढ्दै छन् कोही ओरालो झर्दैछन् । गाडी र मोटरसाइकिल पनि कुद्दै छन् फाट्टफुट्ट । पुरुष भन्दा महिलाहरु ज्यादा देखिए यहाँ आएका । बास्तबमा संसारका हरेक धार्मिक सिद्धान्तको निर्माण पुरुषहरुले नै गरेका भए पनि धर्मको रक्षा र पालना भने महिलाहरुले नै गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । पाको उमेरका मान्छे भन्दा युवाहरुको हुल छ ज्यादा । युवायुवतिहरुको हाँसखेल, ख्यालठट्टा, चालढाल, हाउभाउ हेर्दा उनीहरु यहाँ पूजा गर्न भन्दा पनि रमाइलो गर्न मात्र आएका हुन् कि जस्तो प्रतीत भयो ।
माइकमा ऊँ गं गणपतेनमः भन्ने सुमधुर धून बजिरहेको छ । मन्दिरको आँगनभरी मान्छेको हुल सेल्फी र फोटोमा व्यस्त छन् । हुलमुल छ, होहल्ला छ । शान्तिको आभास भएन मन्दिर परिसरमा । मन्दिरभित्र पस्यौं । मन्दिरका गर्भगृह पनि साना र साँगुरा लागे । त्यहाँ पनि मान्छेको ठेलमठेल छ । पूजा गर्न होइन कुनै चटक हेर्न आएका हुन् कि जस्तो हतार छ मान्छेलाई । मन्दिरको सानो कोठामा मान्छेको उकुसमुकुसले म निसास्सिन थालें । मनलाई एकाग्र र शारिरिक मुद्रालाई ध्यानस्थ बनाउन सकिएन ।
भगवानको मुर्तीलाई खुट्टाले ठक्कर लाग्ने गरी ठेलाठेल छ मन्दिरभित्र । पुजा गर्ने परिपाटी पनि कताकता नमिलेजस्तो लाग्यो । भगवानको मुर्तीमा पूजा गर्नु भन्दा पुजारीबाट टीका थाप्नमा तँछाडमछाड गर्दै छन् मान्छे । मन्दिरमा पुगेपछि त भक्त र भगवानको सोझो संवाद हुनुपर्ने हो । यहाँ त भगवान र भक्तको बीचमा गजधम्म बसेको छ एकजना पुजारी । ध्यान भने दक्षिणातर्फ छ पुजारीको । न मन्त्र, न विधि, न पूजाको कुनै क्रम छ, न प्रकृया छ । गणेशको सर्वप्रथम पूजा गर्नु पर्ने विधि पनि पालना भएको देखिएन । पुजारी पनि न ब्राहमणजस्ता न साधुजस्ता रहेछन् । उनको मिश्रित पोशाकले उनको अवस्थालाई झल्काइरहेको थियो । मानिसको व्यक्तित्वको प्रथम झल्को उसको पोशाक लगाउने ढङ्गले दिइहाल्छ । कतै यी पुजारी पनि माक्र्सबाद पढेर जग्गेमा बस्न आएका पुजारी त हैनन्? मनमा प्रन नउब्जेको हैन ।
कुमार पुजारीसंग कुरा गर्न लागे । ती पुजारी नेपालगंजका रहेछन् । हामी पनि नेपालगंजबाट आएको थाहा पाएपछि पुजारी हामीलाई पछ्याएर फकाउन थाले । अबधीमिश्रित नेपालीमा भने ‘चल्नुहोस म बाबासंग बात कराइदिन्छु, तपाइँका सबै समस्या समाधान गरी दिनु हुन्छ बाबाले’ । शिवधुनीमा चारजना साधु झुम्मिएका छन् । उनीहरुले गाँजा तानेको देखेर मेरो मन टक्क रोकियो । साधु भनेको अध्यात्मको उपल्लो अवस्था हो । साधुहरु लोभी र नशालु भए भने त्यहाँ आध्यात्मिक परिवेश हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । ज्ञान, त्याग र निर्विकार भाव जुन साधुमा झल्किदैन त्यस्तो साधुलाई श्रद्धा गर्न सक्दैन मेरो मनले । साधु बोलाउँदै थिए, हामी छायाढुङ्गातर्फ लाग्यौं । लाम लागेका मान्छेलाई पुजा गराउन छाडेर पुजारी यसरी हाम्रोपछाडि लाग्नु अनौठो लाग्यो । निकै बेरसम्म हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहे ती पुजारीले । उनको आशय कुनै चटक देखाएर हामीबाट किञ्चित् पैसा झार्नु थियो कदाचित् ।
छायाक्षेत्र मन्दिरपरिसरबाट सय मिटर जति तल भिरालो ठाउँमा रहेछ छायाढुङ्गा । २०५८ सालमा म यहाँ आउँदा यो ढुङ्गा उदाङग थियो । अहिले मन्दिरको संरचना खडा गरेर छोपिएको रहेछ । त्यतिखेर चिल्लो सेतो संखमरमर जस्तो थियो ढुङ्गा । चम्किलो ऐनाजस्तो सो ढुङ्गामा हेर्दा टाढाटाढाका बस्तुहरु छर्लङ्ग देखिन्थे । परपरका दृश्य छायाजस्तै देखिने भएकोले छायाढुङ्गा भनिएको रहेछ त्यसलाई । अहिले त सो ढुङ्गा भत्केको पहराजस्तो मात्रै लाग्यो । २०६० सालमा माओबादीले सो ढुङ्गालाई तोडफोड गरेर कुरुप बनाइदिएका रहेछन् । यद्यपि सो कुरुपताले मान्छेको आस्थालाई भने मार्न सकेको छैन । जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ भन्ने गीत त्यसै लेखेका होइनन् कालीप्रसाद रिजालले ।
अफगानिस्थानको बामियान भन्ने ठाउँमा बनेका बिशाल बुद्ध मुर्तीलाई इस्लामिक राज्य खडा गर्ने भनेर युद्धरत तालिबान लडाकुहरुले भत्काउँदा संसारले निन्दा गरेको थियो । यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै रहेछ । प्रकृतिले दिएको यो सुन्दर कलासंग मानिसको आध्यात्मिक चेतना एकाकार भएर आस्थाको भाव जागृत भएको हो । नेपालमा साम्यबाद ल्याउँछौ भनेर युद्धरत माओबादीले त्यो आस्थाको भावलाई महसुस गर्न सकेनन् । भताभुंग पारिएको पत्थरशिलामाथि पोखिने मानिसको आस्थाको सघनता उस्तै छ तर माओबादीहरु भने निकै फेरिइसकेका छन् ।
आजभोलि त मन्दिर व्यवस्थापन समितीका पद ओगटेर उनै माओबादीहरु यो पत्थरशिलाको संरक्षण गर्न पो आइपुगेका छन्’ एक जना तीर्थालुको मुखबाट निस्किएको वचन कानमा ठोक्किए पछि कुमारजी र म मज्जाले हाँसेका थियौं हाहाहा ।
पक्की सडकमाथि फेरि कुद्यौं हामी । थाकेको मन शारदाको बगरैभरी छरियो । चिसो हावाले बतासियो मन । नदी खासै ठूलो हैन । पानी बग्दाबग्दै सुकेको जस्तो । बगेको हो? दौडेको हो? या सुतेको हो? ठम्याउन नसकेर कतैकतै अलमलियो पनि मन । पक्कि घरले भरिएका भोटेचौर र लान्तीबजारका बाक्ला बस्तीभन्दा परपरका फाँट र पहाडी लहर लागे निकै मनमोहक । नदीको बगरै भरी गहुँका बाला लहलह झुलेका गरा छन् । प्रकृतिले यहाँका कुनै पनि कुरालाई खेर जान दिएको छैन । चैवाङजिउलाको पारीपट्टिको एउटा अनौंठो पहाडी ढिस्को देखेर अनौंठो गरी तानियो मन । एकछिन उभिएर हेरिरह्यौं । मनलाई त्यही ढिस्कामा टाँसेर फेरि कुद्यौं हामी ।
शंखमुलबाट दश किलोमिटर जति कुदेपछि आइपुग्यो श्रीनगर । श्रीनगरसंगै जोडिएको छ शितलपाटी । शारदा नदीको छेउको फराकिलो फाँटमाथि युगल जोडीजस्तै अँगालो हालेर छरिएका छन् श्रीनगर र शितलपाटी । तीव्र गतीमा बिस्तारित र विकसित हुँदै गरेका बजार हुन् यी । आधुनिकताको दौडमा हतारसंग दुगुर्दाका परिणति र प्रभाव सर्वत्र छरपष्ट छन् बजारैभरी । निकै फोहोर र अस्तव्यस्त लाग्यो बजार । यहाँका मान्छेले पैसा कमाउने हतारले सरसफाईतिर ध्यान दिन नसकेको हो कि जस्तो ।
व्यापारीहरु आँखा ओछ्याइरहेका छन् सडकमा हिड्ने नौला मान्छेपट्टि । जताततै मम, सेकुवा र मदिराका पसल छन् । शाकाहारी होटेलको अभाव देखियो यहाँ पनि । नास्ता खान एउटा होटेलमा पस्यौं । बल्लबल्ल भेटिएको दुध र पाउरोटीमा तराईकै स्वाद भेटियो । पहाडी स्वादको तलतल अधुरै रह्यो ।
खैरावाङ जाने बाटोको जिज्ञासा पनि पुरा गर्नु छ हामीलाई । होटले साहुलाई सोध्यौं । उनी टेपरिकर्डर जस्तै फरर बोल्न थाले—
‘आफूलाई मोटर साइकिल चलाउन निकै सीपालु ठान्नु हुन्छ भने आज यही बास बसेर भोलि बिहान सोझै देब्रे उकालो लाग्नु होस् यदि आरामले जाने मन छ भने खलंगामा बास बसेर उतैबाट घुम्दै जानु होस्’ ।
‘सोझै जानु भयो भने ठाडै उकालो एघार किलोमिटर जति उक्लिनु पर्छ, खलंगाबाट पहाडको माथिमाथि सत्र किलोमिटर कुदे पनि सजिलो छ बाटो’ उनले निर्णय लिन सजिलो पारिदिए ।
आज यतै बसेर भोलि बिहान सोझै उकालो चढ्ने कि? आज खलंगा बसेर भोलि बिहान उताबाट रमाउँदै जाने? भन्ने विषयमा एकछिन गलफती प¥यो । श्रीनगरमा बास बस्न मन लागेको थिएन कसैलाई । ठाडै उकालो चढ्ने पनि हिम्मत आएन हामीलाई । अन्ततः खलंगा हुँदै आरामले जाने निधो गर्‍यौ ।
श्रीनगरमा शारदा नदीसंगको साथ छुट्यो र उकालोउकालो लाग्यो बाटो । रुकुम जाने सडक छोडेर देब्रे तर्फ मोडियौं र माथिमाथि लाग्यौं । आँखामा सलबलाउन लागे सल्लेरी बनका रुपौला दृश्य । उकालोमा मोटरसाइकिलको गति मत्थर भए पनि आँखा भने बेतोडले कुद्न थाले, आँखाभन्दा मन कुद्न थाल्यो झन् तेज गतिले । श्रीनगरबाट सल्यानको खलंगा नपुग्दासम्म सडक सल्लोले ढकमक्क ढाकिएको पाखोभरी कुदिरह्यो सललललल । नागबेली मोडैमोडको बाटो ठाडै उकालो भएपनि दश किलोमिटर कुद्दै खलंगाको टुप्पोमा पुगेको थाहै भएन ।
सुनसान छ खलंगा बजार । जिल्लाको सदरमुकाम भए पनि उति सारो चहलपहल छैन । ठाडो थुम्कोको टुप्पो र वरिपरि घुचुमुच्च बसेको छ सल्यान बजार । बाइसे—चौबिसे राज्यहरु मध्ये एक सल्यान नेपाल एकिकरणका महानायक बहादुर शाहको ससुराली पनि हो । उनका ससुराले नेपाल एकिकरण अभियानलाई सघाएका पनि थिए । नेपालका इमान्दार राष्ट्रबादी प्रधानमन्त्रीको नाम लिनु प¥यो भने सबैभन्दा पहिला मरिचमान सिंहको नाम आउँछ । उनको जन्म र कर्मथलो पनि हो सल्यान । मरिचमान सिंहको जीवनसित जोडिएका रोचक प्रसङ्गहरु बडो रुचिका साथ सुनाउन अग्रसर हुँदा रहेछन् सल्यानीहरु । मिलन गेष्ट हाउसका साहुजीले पनि साँझ निकै बेरसम्म उनको बारेमा अनेकौं प्रसंग सुनाए ।
पतिले त्याग गरेकी एउटी नारीले एक्लै संघर्ष गरेर उनलाई पढाएको, रक्सी र तमाखु बेचेर गुजारा गरेको, पिताले राष्ट्रिय पंचायतको अध्यक्ष भएपछि मात्रै मरिचमानलाई आफ्नो छोराको रुपमा स्विकारेको, शिक्षक भएर पढाएको आदिआदि हामीले चाख मानेर सुनिरह्यौं । खलंगाको दाहिने पट्टिको अर्को थुम्कोमा उनले पढाएको त्रिभूवन माध्यमिक विद्यालयको सुन्दर भवन पनि देखियो । बजारको बीचैमा उनको घर पनि हे¥यौं । हाल नेपाल बैंक लिमिटेड बसेको रहेछ । मरिचमान सिंहलाई सम्झिदा स्नेहको आद्र्रताले भिजिरह्यो मन ।
खलंगाको पाखोबाट वरपर आँखा डुलाउँदा सल्लाका रुखहरुले पाखाभरी परेड खेिलरहेको आभास गराउँदो रहेछ । जता हे¥यो उतै सल्लाका सर्लक्क उभिएका रुख । यताका डाँडाहरुले अरु बोटबिरुवा उमार्न बिर्सिएजस्तो । अँध्यारो बढेसंगै सल्यानी परिवेश आँखाबाट ओझेल पर्न थाल्यो । अँध्यारो त जहाँको पनि उस्तैउस्तै हो कालो र सुनसान ।
साँझको बेला उसै पनि शीतल, त्यसैमा सल्यानी बतासले चिसोको अनुभूति गराइरह्यो । सल्यानको चिसोचिसो रातले नेपालगंजको गर्मीलाई बिर्साइदियो ।
बिहान छिट्टै तयार भयौं । रामनवमीको तिथि परेकोले पेटमा केही नहाली जाने भयौं । रमाइलो गर्न मात्र आएका होइनौं आखिर आस्थाको सतहमा श्रद्धाको सिंचन पनि गर्नु छ हामीलाई । खलंगाबाट झिसमिसेमैं हिड्यौं । खैरावाङ खलंगाको ठ्याक्कै पारिपट्टिको थुम्कोमा छ तर पश्चिम गएर दक्षिण गै फेरि पूर्व मोडिनु पर्छ रे त्यहाँ पुग्नलाई । सैजवाल टाकुरासम्म सललल कुदिरह्यो बाटो । वरपरका पहाडी लहर र थुम्काहरु आँखा तान्दै, आँखा मिच्दै निद्रामुक्त हुँदै छन् । उज्यालो हुँदै जाँदा सल्यानका पहाडहरुको प्रातिभ सौन्दर्य फेरि उजागर हुन थाल्यो।
सूर्योदयको लालीमा पोखिएका पहाडी पाखाहरु झन्झन् शोभायमान देखिन लागे । वरपर कतै पनि पहिरो, भूक्षय नभएका यताका पहाड भौगोलिक रुपले सुगम नै हुन् । तलतलका होचाहोचा पाखा, खेत र गराले भरिएका छन् भने माथिमाथिका अग्लाअग्ला थुम्काहरु सल्लाका हरिया रुखले ढाकिएका छन् । उत्तरतिर कँजेरी र चाँदेकरेन्जीका पहाडहरु केही अग्ला देखिए । सैजवालटाकुराबाट बाटो कहिले दायाँ, कहिले वायाँ, कहिले माथि, कहिले तल मोडिन लाग्यो । तैपनि पहाडको माथिमाथि समानान्तर दौडिरेहकै छ बाटो । पिपलनेटामा सल्यानको थुम्कोलाई दुई तिरबाट फन्को मार्ने दुईटा बाटा आएर भेटिए । दुधारा पोखराबाट सिमखर्क जाने बाटो पनि छुट्टियो । सजिलो छ भन्थे बाटो, कहाँ सजिलो हुनु?’ बुनु फतफताउन लागिन् ।
कच्चि बाटो त्यसैमा पहाडको सजिलो त कहाँ हुनु । यद्यपि अन्तका पहाडी बाटोजस्तो यो बाटो खासै असजिलो हैन ।
नाउले मार्केमा पुगेपछि पिपलको भव्य चौतारो र विद्यालयको सुन्दर भवनले आँखा तान्यो । यहाँबाट बाटो दक्षिण र मधाना भन्ने ठाउँबाट पूर्व मोडियो । पहाड खनेर बनाएका ससाना गरामा गहुँ बाली लहलहाएको छ । वरपर आँखा डुलाउँदै हामी कुदिरह्यौं । मधानामा गिरिहरुका समाधिको बीचैबीचबाट बाटो दुगु¥यो । लच्छिनपुर र हिउल्चा काटेपछि सल्लाका सुन्दर पाखाहरु देखिन लागे ।
बाटोबाटोमा छरपस्टिएका छन् बजार । बाटोका दोभान वा गोरेटाका चोक भेटिनु हुन्न दुई चार वटा पसल देखिइहाल्ने । दश बारह ओटा पसल भएपछि त ससानो बजारै भैहाल्ने । सल्लाका अग्लाअग्ला रुखले ढपक्क ढाकिएका छन् हिउल्चाका पाखा पनि । सिंगो वातावरण सल्लोमय छ । सल्लो पोखिएका पाखामा अरु कुनै बोटबिरुवाको उपस्थिति देखिएन । सल्लो कसैसित मिलेर, सहकार्य गरेर बस्न सक्दो रहेनछ । यद्यपि यताको मानविय जनजीवन भने मेलमिलापपूर्ण र विविधतामय छ ।
आर्य, मंगोल र मतवाली समुदायका साझा बस्ती छरिएका छन् पहाडी थुम्काथुम्कामा । यही साझापन र साझामनको साझा चिनारी हो नेपाली संस्कृति भनेको । प्रसिद्ध कवि रमेश क्षितिजको जन्मस्थल हो हिउल्चा । उनलाई पनि सम्झिएँ एक छिन । हिउल्चाका सल्लेरी पाखाहरुको अनुपम सौन्दर्यले नै होला कदाचित् उनीभित्र कविताको झङ्कार झङ्कृत भएको ।
सिर्सिर बतास चलिरहेको छ । भुँइभरी सुकेका पात खसेर छरपस्ट छन् सल्लोकै । पहाड खोस्रेर बनाइएको साँगुरो बाटो आखिर खैरावाङ पुग्यो । डेड घण्टाको दौडमा सत्र किलोमिटर कुदिएछ । खैरावाङको तल्लो डिलबाट उत्तर फर्केर हेर्दा हातै लम्काएर पनि भेटिएलाजस्तो नजिकै देखिन्छ खलंगा । तर अङ्रेजी अक्षर यु आकारको लामो फन्को मारेर आउनु प¥यो यहाँसम्म ।
आँखा अगाडि भूवनेश्वरी भगवतिको मन्दिर ठिङ्ग उभिएको छ । यही हो हाम्रो यस यात्राको गन्तव्य भने पनि लक्षबिन्दु भने पनि । वरिपरि छ्याङ्ग खुलेको सफा आकाश, उज्यालो थुम्कोमाथि कलात्मक मन्दिर र मन्दिरसम्म उक्लिने सिढीदार उकालो । मन्दिरभन्दा परपरका थुम्का, हरियालीले भिजेका पाखा, खेत गरा, कान्ला ढिस्काहरु शान्त छन् क्लान्त छन् । चित्ताकर्षक छ परिवेश । हामी पनि उक्लियौ मन्दिरतिर । आँगनभरि मानिसको भीड । बलि चढाउनेको ताँती । कोलाहल, शंख, घण्ट र मानिसको कल्याङमल्याङ । पङिक्तबद्ध भयौं हामी पनि तर मानिसहरुको ठेलमठेल छ । म मन्दिरमा पुगेपछि एकछिन आँखा बन्द गर्न मन पराउँछु तर यहाँको होहल्ला र ठेलमठेलले मनको एकाग्रता भंग गरिरह्यो । मन्दिरमा पुगेपछि शान्त, एकाग्र र ध्यानमा चित्त लगाएर पूजा गर्न जाँन्दैनौं हामी नेपालीहरु ।
बली चढाएका बोका, पाठाका निर्जिव शरिर र आँगन भरी बगेको रगतले मन दिङ्मिङ् भैरह्यो । बलिप्रथा हिन्दु धर्मको सबैभन्दा ठूलो पतनमार्ग हो स्वामी अवधेशानन्दका वाणीहरुले कानैनिर आएर झस्काइरहे । अहिंसा परमोधर्मको मूल मर्म भएको हिन्दु धर्ममा यो कुप्रथा कसले भित्रायो होला । धर्मको नाममा चलाइएका अरु प्रथालाई हामीले त्याग्दै गए पनि यो प्रथा किन अँगाली राखेका होलान् मान्छेहरुले? अनेक प्रश्न र जिज्ञासाहरु मनभित्र उठी रहे र मनभित्रै निरुत्तर रहे ।
म त देवीलाई अहिंसा र सदाचारकी प्रतीक मान्छु । मनको, श्रद्धा आस्था र विश्वास चढाइरहेँ मनमनैले ।
हामी निकै बेर उभियौं मन्दिरको पटाङ्गीनीमा । ढुंगे पर्खालमा उभिएर वरपर आँखा नझिम्क्याएर हेरिरहन मन लाग्यो । बिहानको चिसोचिसो हावासंगै उडिरह्यो एक तमासले मन । मन्दिर तलका गह्राहरु, गाडी पार्किङ् गर्ने ठाउँ वरपर र पसलको आसपासमा प्लास्टिकका झोला र मिनरल वाटरका बोतल फालेको फोहोरले मन कुँडिएर आयो । पूजा गर्न आउनेहरुले पूजा गरिसकेपछि अगरबत्ति, सलाईका खोस्टा, फूल र प्लाष्टिकका झोलाहरु जहाँ पायो त्यही फालिदिने रोग यहाँ पनि देखियो ।
अक्षर, टीका जहाँ मन लाग्यो त्यही लगाएर मूर्ती र मन्दिरमा चढाइएका त्रिशुल, घण्टहरुलाई कुरुप बनाउनमा तीर्थालुहरुले कुनै कमी गरेका छैनन् । प्रदुषणले च्याप्दै ल्याएको छ खैरावाङलाई । सडकको स्तरोन्नति संगै मानिसको आवत जावत र गाडीमोटरको आवागमन बढेसंगै फोहोर पनि बढ्दै जाने खतरा देखियो । यहाँ पुगेपछि उर्लिएको आस्था र कुतुहलताको छाललाई यहाँको प्रदुषणले निस्तेज बनाइदियो । मानिसलाई मन्दिर आउनु अघि चित्त शुद्धि, शरिर शुद्धि र स्थान शुद्धि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल गर्न सद्बुद्धि देऊ भगवति ! मनमनै पुकारेँ ।
माथिबाट निर्मिमेष नियाली रहेका सूर्य तेजिला किरण प्रहार गर्दै श्रीनगर झर्ने बाटो छेक्न आइपुगे । हामीलाई कुद्नु छ फेरि जति कुदेर आयौं त्यति नै लामो बाटो । ‘धेरै अलमल गरेपछि बाटैमा बस्नु पर्ला हिडौं अब’ धेरै पटक घच्घच्याएपछि बल्ल अल्छि मान्दै उठिन् बुनु र सुदेष्णा । सुस्तसुस्त ओरालो लाग्यौं ।
आँखाअगाडि पहाडी परिवेशको विहङ्गम दृश्यले नाच्न छाडेको छैन । पहाडहरु, पखेराहरु, चट्टानहरु, ढुङ्गाहरु, देउरालीहरु, खेतहरु, कान्लाहरु, घुम्तीहरु, मोडहरु, खोलाहरु, खोल्साहरु नेपालमा जता गए पनि उस्तैउस्तै हुन्छन् तर जहाँ पुगे पनि नयाँनयाँ लाग्छन् । नयाँपनमा आफ्नोपनको न्यानो भेटिन्छ सर्वत्र । यहाँका सल्लाका बोटहरु पनि आफ्नो मौलिक गान गाइरहेका छन् उसैगरी । मभित्र भने एउटा मुक्तकीय भाव सकसकाउन लाग्योः
आँखामा आदित्य खोजूँ कि नखोजूँ म अलमलमा छु ।
रहरमा लालित्य खोजूँ कि नखोजूँ म अलमलमा छु ।
दृष्टि स्वयम्मा अभिधा र भाव अलङ्कार हो भने ।
दृष्यमा साहित्य खोजूँ कि नखोजूँ म अलमलमा छु ।
~ खगेन्द्र गिरि ‘कोपिला’
तीन मुक्तक !
कबिता – मरूभूमिकाे बस्ती !
सृष्टि मल्लका ३ मुक्तक !
कबिता ~ जुन !